Imtixaanka Sokkia Wadarta Saldhiga SET 630RK - Gofumed
Mee, 2010 GPS / Qalabka, aragti ugu horeysay, topografia
Waxaan billaabay inaan arko qaabkan, dhamaadka bisha waxaan rajeynayaa inaan sameeyo tababar toos ah si ay farsamoyaqaanadu yihiin wacdinta in ay wararka. Ilaa hadda waxaan isticmaalnay Set520K, kaas oo uu hore u sheegay.
Waxaan ku siin doonaa aqoon-is-weydaarsi dhammaadka May ee 2010, ha ahaato Honduras ama El Salvador. Haddii qof uu degan yahay oo uu rabo inuu saxiixo, waa la soo dhaweynayaa.
Haddii aadan awoodin taariikhdaas, ma aha wax aad u badan in laga tago farriinta, sababtoo ah waxaan qorsheyneynaa inaan sameyno mid kale.
Maxay ka dhigan tahay R?
Waxaan ka imid maskax la'aanta, taas oo muujineysa in ay qaadan karto akhrisyada miisaankeedu yahay masaafo oo aan lahayn waajibaad la isticmaalayo prism. Tani waa wax aad u macquul ah, sababtoo ah shaqo fiican oo qorsheysan ayaa suurtogal ah in la badbaadiyo mid ka mid ah cadeneros, ma dhahayo labadaba maxaa yeelay qof ayaa nagu caawinaya inaan nagu caawino nooca tripodka. In a sahaminta cadastiga Mashaariicda magaalada ama mashruuca injineernimada, in ay awood u yeeshaan inay ka soo kabtaan waxyaabaha jira hadda waa faa'iido weyn.
Waa maxay k
Ma ka yimid keyboard, ama waxa la yiraahdo kumbuyuutar la ballaariyey. Warqaddaas waxaa qaadaya dhammaan kombiyuutarada kuwaas oo kaftanka furayaasha farsamooyinka asaasiga ah horeba waxaa ku jira guddiga dheeraadka ah ee lambarrada iyo sidoo kale u adeega inay galaan waraaqaha. Sure, Tani 630RK waxay keenaysaa oo kaliya hal dhinac, ka duwan 520K, inkasta oo farsameyaashu ii sheegaan inaanay arag wax faa'iido weyn u leh kumbuyuutarka labadaba haddii aysan tababar qaadan.
Noocyada qaabkani waa:
Farqiga u dhexeeya kooxda koowaad iyo kan labaad (kuwa kale), waa 3, taas oo micnaheedu yahay laser 3R oo aad ku qaadi karto mitirada 350 iyada oo aan la saarin ilaa 800 leh miniprisma. Inkastoo kan kale uu yahay laser class 2, muujinta ilaa mitirka 200 wax dheeraad ah. Tani waxay muhiim u tahay hagaajinta saxnaanta, qabashada waqtiga habka degdegga ah, inkasta oo aan kugula talin lahaa in aad fiiriso miisaan siman ee saldhigyada guud ee aan ku tusay wakhti kale.
Qalabkan (3 Series) ayaa lagu sheegay inuu yahay mid aad u heer sareeya heerka qalabka, inkastoo horumarinta software ay tahay mid la ogaanayo, gaar ahaan mitirka masaafada. Laserku wuxuu leeyahay khadad aad u sarreeya, si aad u qaadatid dhibcaha sida saxda ah ee ujirta darfaha, geeska derbiga, oo weli caqabado hor leh u leh sida mesh silig ama baadiyaha. Astaanta sawirku waxay muujinayaan waxqabadyada ay kooxdani keenayso, oo aan ku sharxi doono ugu yaraan laba:
Ka maqnaada laba dhibcood, fiiri in marka la eego qadarka ku yaal geeska guriga (C), shaqaaluhu waxaa lagu dhejin karaa jilicsanaan, waxay muujinayaan inaan isku deyn doono laba dhibcood (A iyo B) oo galaan masaafada labadaas dhibcood ee aan ka ogaano Cuntada Sidaa awgeed, kooxda ayaa ogaanaya halka ay c.
Xisaabinta aagga, qalabkani wuxuu la socon karaa 50 isuduwaha 3D, xisaabi aagga. Tani waa mid xiiso leh, haddii ay dhacdo cabirro kala-duwan ama markii aan rabno in aan aragno aagga la qaaday ka hor intaanay imaanin golaha wasiirrada download iyo soo qaado garbaha.
Tani waxay ku xirnaan doontaa qaybiyaha xaafadda, tixraaca aan la tashaday Froogle, qiimaha iigu muuqda wuxuu ku dhow yahay US $ 7,000. Laakiin gujinta xiriirka ayaa i siinaya qiime sare, iyada oo aan ku jirin qalabyada.
Sokkia waxay leedahay qaybiyaasha waddan kasta, laakin wadada iibka ah ee iibka ah ee internetka, ayaa la isku daraa. Fikradayda, laba ulood, laba noocyo kala duwan iyo tripod, waa inay halkaas ku socdaan, ku rid garoonka diyaaradaha. Tani waa in lagu daraa kharashka dhoofinta dhoofinta (laga yaabee $ 150) iyo cashuurta iibka, taas oo ku xidhan dalka.
Iibsashada internetka oo leh iibiye aan sharciyeysneyn, kharashka maraakiibta, iyo waxyaabo kale oo aan waxtar lahayn. Waxay u egtahay in ay ka sii qaalisan tahay deymankuna waa mid adag. Qalabka la isticmaalay waa bakhtiyaan nasiib daro badanaaba ku dhamaada.
Waxaa la aaminsan yahay in qaybiyaal maxalli ah ay tahay inay ku dhex jiraan qiimaha qiimaha, laga yaabo inay ilaa US $ 8,000. Haddii ay noqoto mid khaas ah qiimaha ay sarreeyaan waxay noqon doonaan kuwo sarreeya sababtoo ah ma haystaan ​​tartan. Waayo, waxaa jira (fiican, maahan dad badan, laakiin waxaa jira) qaybiyeyaasha iibiya heer gobol, ka baxsan dalalkooda halka ay ku matalayaan, dhammaan dammaanadda sharciga iyo qiimo aad u ballaaran.
Buug-gacmeed isticmaalka saldhiggan guud waxaa soo shaqeeyay Leopoldo Hernandez iyo kooxdiisa.
Post Previous«Previous Tools Beta Available 2.0 PlexEarth
Post Next Ku soo sawir galka khariidadaha GoogleNext »
33 jawaabta "Baaritaanka Sokkia Total Station SET 630RK"
Marcelo paturalski isagu wuxuu leeyahay:
July, 2020 at
Qaar baa iga caawin kara isugeynta guud ee saldhigaan set630rk.
Waqti aad u yar ayaan qaatay waxaanan haystaa waqti adag oo aan ku calaamadinayo ama aan leeyahayito, waa shaqadii laba isku duwaha oo la sameeyo si loo dheereeyo khadkaas isla markaana aan calaamad u lahayn gabadito ama ponto dessa extensão.
ma jiraa qof karti u leh ??
OUBELLA isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2019 at
svp comment changer la langue d'une station sokkia et topcon
Israel benedito maia isagu wuxuu leeyahay:
Nofeembar, 2018 at
MINHA ESTAÇÃO WAA CADAADIS UM E97, QUALSERIA AMA DHAQANKA, MAIS ESSE ERRO SO waxay kuxirantahay FE FE KADIB OO KU SAABSAN, DEPOIS NAO CODSANAYSA MAIS, NORMALLY. AGUARDO JAWAAB. BILAASH
BERNARD PIERRE isagu wuxuu leeyahay:
Fariin qoraal ah oo isbeddel ah oo ku saabsan 510 du chinois au francais ou englais
Nofeembar, 2017 at
sababtoo ah xagal toosan marka la qiyaasayo dhibicda waxaan ku helayaa E90 mana cabbireyso
Justinian isaiah isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan haystaa saldhigga Wadarta Socdaalka SET 630RK; oo waxaan u baahanahay inaan kiciyo xasaanad, sababtoo ah ma siinayso fasalada, waxaana u baahanahay inay i caawiyaan, sida loo sameeyo.
Alirio vasquez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan leenahay wadarta isku-xirka sokkia ee 650rx ayaa iga dhigaya khalad (e024) mana akhriyo masaafada, haddii aan akhriyo xaglaha cirifka iyo xaglaha. Anigu waan samayn karaa si aan u tirtiro nooca qaladka ee aan ku sheegin buugga gacanta oo aan ka hadlin. Qof baa fadlan iga caawin kara, mahadsanidee!
Janaayo, 2017 at
Internetka kuma arag bog tilmaamaya sida loo sameeyo taas. Waxa ugu habboon ayaa ah inaad la tashato alaab-qeybiyaha qalabkaas dalkaaga.
Anigu waxaan qabaa SOKIA SET 630RK
Weydii sida aan u cusbooneysiisto SOFTWARE-ka Caalamiga ama AMA MARKA AAN KA HELO IN AAN LAGU SAMEEYO INUU SAMEEYO AMA FOOMAN
FADLAN AAD KA HELI KARTAA
Everis isagu wuxuu leeyahay:
Hello, waxaan jeclaan lahaa in qof iigu sheego waxa dhacaya marka wadarta guud ee nambarka 530 ii sheegto E191 waxa dhacaya marka ay dhacdo
Carmen isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2016 at
Waxaan raadinayaa topograph-ka, moodalka sokkia 630 ama sokkiacx105 waa inaad dirtaa Spain .. Waa inaad deg deg noqotaa, laba batteriga. FADLAN codso xigasho.
José Antonio Bran. isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2015 at
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay sidoo kale iibiyaan qaybo dayactir ah, waxaan u baahanahay kumbuyuutar dhamaystiran oo ah xarun 630r.
Agoosto, 2015 at
iskutallaab isagu wuxuu leeyahay:
650rx waxaa laga beddeli karaa luuqad
CARLOS SUAREZ isagu wuxuu leeyahay:
Andres Mogollon isagu wuxuu leeyahay:
Agoosto, 2014 at
waa in la ogaado sida aan u sameeyo si aan u badalo luuqadda wadarta guud ee xariijinta xaafadda 550X
JOWHER TZONI ROJAS isagu wuxuu leeyahay:
Hello, galabtii fiicnayd ee su'aasheyda waa: Sidee ayaan u isticmaali karaa shaashadda Isbaanish ee saldhigayga guud SOKKIA SET 630 RK3 horaan baan idiinka mahad celinayaa mahadnaqaaga.
JUAN MANUEL LOZANO RODRIUEZ isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u Baahan Yahay 650RX, MACNIINKA WAXAAD U BAAHAN TAHAY IN SPANISH
JORGE GALINDO isagu wuxuu leeyahay:
KA HELSAN TAHAY IN LAGU QAADO MAGANGALYADA GOBOLKA MAGAALADA HESHIISKA WAXAA LAHAYN
Alvaro isagu wuxuu leeyahay:
Sidee baan u bedelayaa luqadda shaashadda xarunteeda sokkia 630rk?
HUGO ALFONSO GOMEZ GODOY isagu wuxuu leeyahay:
Sideen ku heli karaa isugeynta saldhigga buugga sokkia ee 630 rk oo Isbaanish ah
Waa hagaag, waxaa jira waxyaabo badan oo la arko:
1 Haddii aad la timid CD markii aad iibsaneyso adaparka, waa inaad rakibta darawalka.
2 Haddaysan ahayn, iyo maadaama aad haysatid Windows 7, waa inay noqotaa Plug & Play.
3 Waa inaad xaqiijisaa in dekedu sax tahay; Taas waxaa lagu sameeyaa:
Bilow, guddi xakameyn, Nidaam halkaasna waxaad ku doorataa maamulaha aaladda.
Ka raadi Dekedaha (LPT & COM) mid oranaya: USB Prolific USB to Serial Comm
Xullo dejinta horumarsan, oo hubi in xawaaraha wareejinta uu ku yaallo 33600 bps iyo lambarka dekedda 'X dekedda' 1
Tani waa inay shaqeysaa, mararka qaarkood waa inaad midig-gujiso dekada oo aad doorataa inaad raadiso isbeddelo. Si kastaba ha noqotee, ahaanshaha Plug & Play, isbedelka waa in si dhakhso leh loo aqoonsadaa.
Yoonaataan isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan leenahay xarun guud oo dhan oo lagu magacaabo set610. iibso xargo oo isku dhejisa woqooyiga si loo xiro kombuyuutarka xarunta. wax walbaa waa inaan ogaanin. kaa caawiya inaad qorto xogta nidaamkaygu waa daaqadaha 7
Janaayo, 2012 at
Calaamadee xidhiidhkan, oo daabacday Heerka Galileo.
Halkaas waxay ku sharaxayaan sida loo xalliyo dekadaha.
Serial Port 1 COM waa inay ahaataa xawaaraha gudbinta ee 33600 bps
Tani waa dhibaato caadi ah, ma aha Sokkia khaladaadka laakiin Windows sababtoo ah xakamaynta dekadaha laptops badanaa waxay isku dhacaan, marka laga reebo maabka.
Ma garanayo haddii qof uu ku guuleystay xalinta.
Rk cusubi waxay leeyihiin kaar SD ah, taas oo ka takhalusi doonta dhibaatadan haysashada cabirka.
RICHARD ZAMBRANA isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan leeyahay saldhigga a total Sokkia Lisitaanka, waxaana uu adag xogta aan dajinta in laptop la suuqa kala 7 waxaa jiri doona qaar ka mid ah darawalka ama qaar ka mid ah si ay awood xogta laga geysto waa mid aad u adag iga soo baxay mar walba oo shaqada in magaalada ay lumiyaan xogta Waan ka mahadcelinayaa wixii macluumaad ah. richard
Hi Carlos Carlos. Si aad uga jawaabto waa inaad sheegtaa wadanka aad tahay.
carlos andres ramirez ramirez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado meesha aan u tegi karo si aan u helo buuga isticmaalka meheradda guud ee sokkia, model 630rk.de ka hor gacanta ayaan kuugu mahad celinayaa
Fikradda ma xuma. Suuqa loogu iibiyo qalabka Mexico ayaa ah mid xadidan laakiin iibinta tababarka, taakuleynta, dayactirka iyo adeegyada habeynta ayaa ah mid aad u ballaaran oo aan la siinin kuwa yar.
Taasi waa dhibaato cadaalad ah oo soo noqnoqda. Guud ahaan waxaa lagu soo bandhigayaa laba xaaladood:
1 Taasi miyaa USB cable ma aha oo kaliya gudbinta xogta laakiin sidoo kale tamar, waana sababtaas tan ay aad ugu fududahay in la waxyeeleeyo dekada ama markabka keeni kara aaladda isku xirka. Waa inaad had iyo jeer aragtaa haddii ay suurta gal tahay in fiilada ay dhaawacantay, oo lagu tijaabinayo mashiin kale.
Haddii ay dhacdo in fiilooyin xiriiriye ah, sababtoo ah waa wareejinta macluumaadka kaliya, ma soo bandhigaan dhibaatooyinkaas.
2 Sababta kale ayaa ah sababta oo ah dekeda USB aad ayey u fududahay inay gasho khilaafaad, maxaa yeelay waxaa jira dhowr, waxay u gudubtay moodello kala duwan oo noocyo daaqado ah way sii adkaaneysaa. Sidaa daraadeed, isku dhaca ayaa aad ugu badan mashiinada leh Windows Vista ama Windows 7.
Ujeedadu waa in ay ka shaqeeyaan soo dejinta kombiyuutarada leh Windows XP hooyo, oo aan hoos u dhigin Win7.
Waan ka xumahay in aanan sameyn karin wax ka badan sharraxa dhibaatada. Waxay ku sii jirtaa in loo istcimaalo kombuyutarka desktop loo soo dejiyo sababta oo ah laptop-ka cusub ma keeno deked taxane ah. Laakiin tixgalinta inay macquul tahay in shaqo lumo maxaa yeelay ma soo degsan kareysid xogta, waxaa fiican inaad ku laabato xukunka daandaanka ee kombuyutarka, gadan karaya taleefanka gacanta ama sii wadida adeegsiga Windows XP.
Amancio SULCA QUISPE isagu wuxuu leeyahay:
Hello aan aad u jeclahay, waxaan ahay hadda eegaya saldhigga guud SOUTH 320NTS ... laakiin dhibaatadu waxaa weeye AAN soo bixi kartaa MACLUUMAADKA TO LAPTOP..PARECE A in aysan aqoonsan cable USB kaliya waxay aaminsan tahay ... Puerto qaab (ORIFIOS K), tani waxay u muuqataa KALIYA WAXAA ANTRIGUAS QALABKA KUMBIYUUTARKA ... HADDII aAN KARTO AYUFARME..O iyaga ii soo diri doonaa ...
SOY TÉCNICO TOPOGRAFO ... AYACUCHO-PERU
Sidee ayaad tahay? Miyaa ganacsigaagu hadda yahay?
Anigu waxaan ahay wakiil Latin ah oo ka socda shirkadda SOUTH SOUTHERINGING COMPANY.
Shirkaddayadu waxay u heellan tahay soo saarida iyo soo dhoofinta qalabka korjoogteynta iyo qalabka.
Websaydhka shirkadeena ayaa ah kuwa soo socda: http://www.southinstrument.es/
Ha ka waaban inaad nala soo xiriirto haddii aad qabtid wax su'aalo ama dhibaatooyin ah.
Salaan sharaf leh
Waxaan ka walaacsanahay inaan ku bilaabo dayactirka qalabka loogu talagalay topography-ga laakiin ma aqaan cidda aan la xiriiri karo, hadda waxaan haystaa shirkad yar oo u heellan adeegyada topograafiga iyo mashaariicda injineerinka isku-dhafan, laakiin waxaan xiiseynayaa inaan ballaariyo iyadoo la eegayo bixinta adeeg aan u arko inay lagama maarmaan u tahay Cancun Quintana Roo, Mexico.
Waxaan rajeynayaa inaad ixtiraami kartid ... mahadsanid badan.